काठमाडौँ आउदै हुनुहुन्छ ? काठमाडौ आउन र छोड्न चाहनेहरुका लागि लागु भयो यस्तो नयाँ नियम, – Sandesh Press
June 23, 2021 265
काठमाडौँ आउदै हुनुहुन्छ ? काठमाडौ आउन र छोड्न चाहनेहरुका लागि लागु भयो यस्तो नयाँ नियम, काठमाडौं । खुकुलो हुने गरि थपिएको निषेधाज्ञा अवधिमा काठमाडौं उपत्यकामा प्रवेश/बाहिरिन चाहनेहरुका नयाँ नियम लागु भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा प्रवेश गर्न चाहनेले अनुमति लिएर आउनुपर्ने भएको छ।
यस्तै सरकारले शर्तसहित आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान खोल्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले गन्तब्य र वायुसेवा कम्पनीअनुसार कोटा तोकेर हवाई उडान खुला गरेको हो ।
Prev७ बार मध्ये यी बार जन्मेका व्यक्ति हुन्छन् धेरै भाग्यमानी ! तपाईको राशि हुन हो ? हेर्नुहोस् …
Nextह्वात्तै बढ्यो सुनको मूल्य, हेर्नुहोस् तोलाको कति पुग्यो ?